I-NOx-Reduction yi-Oyili / Amanzi-Emulsation - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-nitrogen oxides (CHAx) yaziwa ukuthi iyingozi ngokushesha empilweni yabantu kanye nemvelo. Imishini ye-diesel kanye ne-petroli yocingo ehamba phambili neyesitoreji inomthelela ikakhulukazi ku-NO emhlabeni jikelelex ukuphuma. Ukufakwa amandla kaphethiloli ngamanzi kuyindlela yokunciphisa i-NOx ukukhishwa kwezinjini. I-emulsification ye-ultrasonic iyindlela ephumelelayo yokwenza ama-emulsions amafutha amancane / amancane.
Izimoto namaloli, ama-aircrafts, ama-generator kagesi, ama-forklifts, ama-air conditioning amayunithi nama-boilers akhiqiza inani elikhulu lezinto eziyizinhlayiyana (PM) kanye NOx ngokushisa kwemikhiqizo ye-petroleum. CHAx ibhekisela kwimifino ye-nitric oxide (NO) ne-nitric dioxide (CHA2) kanye N2O, CHA3, N2O4 no-N2O5. I-nitric oxide ne-nitric dioxide kunomthelela ekwindeni ephansi e-ozone, i-smog futhi ziyingozi emvelweni nakubantu. Umthethonqubo wezemvelo ukhuluma ngokukhishwa komoya okungcolile ukuqinisa imingcele. Ukukhishwa kwegesi nakho kufaka phakathi i-sulfur dioxide (SO2) ngenxa yamakhemikhali esibabule. Le nkinga incishiswa yi-hydrodesulfurization noma i-desulfurization esebenzayo i-ultrasonically.
Ukugijima ku-Fuel / Emulsion Water
Phakathi neminyaka yamuva nje, umsebenzi omkhulu usuwenziwe kule ithonya lamanzi ku-CHAx amazinga okuphuma. Amafutha ahlukahlukene: ukulinganisa kwamanzi okuphuma emanzini kusuka ku-1: 1 kuya ku-19: 1 kuye kwavivinywa izakhiwo zomlilo. Ezimweni eziningi, amaphesenti angu-1 kuya kweyesibili yamaphesenti angu-surfactant ayengeziwe ukuqiniswa kwe-emulsion.
Ukushisa kwephethiloli kwakha amandla okushisa nokusebenza. Ingxenyana ye-mechanical ingasetshenziswa ukushayela i-pistons noma ama-turbine ukuqhuma noma ukukhiqiza ugesi. Ezinjini eziningi, amandla okushisa awasetshenziswanga. Lokhu kubangela ukusebenza kahle kwe-thermodynamic.
Okungenani. 90% we-CHAx okubangelwa inqubo yokushisa amafutha yi-CHA. I-NO isakhiwe ngokuyinhloko nge-oxidation ye-nitrogen ye-atmospheric (N2). Amanzi afakwe emotshweni aphansi ekushiseni okushisa ngenxa yokuphuma kwamanzi. Uma amanzi e-emulsion yamanzi abizayo, amafutha aseduze aphefumulwa, futhi. Lokhu kwandisa indawo ebusayo. Ukushisa okuphansi kanye nokusabalalisa okungcono kwamafutha kuholela ku ukwakheka okuphansi kwe-CHAx.
Ukwethula amanzi ekushiseni kwamafutha kuye kwaboniswa emisebenzini eminingi wehlisa i-NOx ukukhishwa. Amanzi anganezelwa ngokwenza i-emulsion yamafutha / amanzi ngezindlela ezimbili:
engaqiniseki: emulsification eline-inline yamanzi ibe yi-fuel ngaphambi kokujova
iqiniswe: ukwakhiwa kwe-emulsion epholile / yamanzi okumele isetshenziswe njenge-fuel-in in alternative fuel
Canfield (1999) ufingqa i-CHAx ukunciphisa ngokusetshenziswa kwamanzi nezinye izithasiselo:
Amanzi afaka amandla%: 10 kuya ku-80%
CHAx ukunciphisa ngu: 4 kuya ku-60%
Amanzi angeze ngemoto%: 25 kuya ku-50%
CHAx ukunciphisa ngu: 22 kuya kuma-83%
I-emulsion iyinhlanganisela ngokuvamile iziqu ezingenakudliwa (izigaba), njengamafutha namanzi. Phakathi nenqubo ye-emulsification, isigaba sokusabalalisa (isib. Amanzi) sitholwa esigabeni samanzi (isib. Amafutha). Ngokusebenzisa ishear ephakeme, usayizi wezinhlayiya (= usayizi we-droplet) wesigaba sokuhlakazeka sincishisiwe. Ecincane ubukhulu bezinhlayiyana, ukusimama okungaphezu kwe-emulsion eyenziwe. Ukuzinza okungeziwe kungatholakala ngokusungulwa kwama-surfactants noma okuqinisekisiwe. Chofoza ku-graphic above ukubona imiphumela yesampula ye-emulsification ye-ultrasonic yamanzi angu-10% emajini ngamafutha (i-Velocite 3, i-Mobil Oil, i-Hamburg yaseJalimane). Lesi sifundo senziwa ngu U-Behrend no-Schubert (2000).
I-Ultrasound isiqinisekisiwe ukukhiqiza emulsions ejwayelekile kakhulu amanzi emanzini (w / o) namafutha emanzini (o / w) yi- ukugcoba okuphezulu kwe-cavitational. Njengoba imingcele ye-ultrasonication ilawulwa kahle, usayizi wezinhlayiyana nokusabalalisa kahle eguquguqukayo futhi ephindaphindiwe. Ngokujwayelekile, i-ultrasound isetshenziselwa isisetshenziswa se-flow-cell. Ngakho-ke, i-emulsion ingaba kwenziwa ngokuqhubekayo ku-intanethi. Ngenxa yalesi sizathu, i-ultrasonication ingasetshenziselwa ukwakhiwa kwe-emulsions ezinzile futhi engazinzile.
Ithebula elingezansi likhombisa amandla okucubungula okujwayelekile amazinga ahlukahlukene e-ultrasonic amandla.
100 kuya 400L / hr
1kW, isib I-UIP1000hd
400 kuya 1600L / hr
4kW, isib UIP4000
1.5 kuya 6.5m³ / hr
16kW, isib UIP16000
10 kuya 40m³ / hr
96kW, isib 6xUIP16000
100 kuya 400m³ / hr
960kW, isib 60xUIP16000
I-Ultrasonic Degassing ne-Defoaming
I-Ultrasound iyasiza futhi ukunciphisa inani lamabhulebhu emoyeni kumxube we-emulsion. Isithombe ngakwesokudla sibonisa umphumela (5sp. Ukuqhubeka kwezithombe ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla) we-ultrasonication kokuqukethwe kwe-bubble. Njengoba ukuhluka kokuqukethwe kwe-bubble kubangele ukushintshashintsha kwesikhathi sokujola, a i-degassing, i-deaeration kanye ne-defoaming by ultrasonication ngcono ukusebenza injini.
I-Hielscher yiyona ehola umphakeli wamandla aphezulu ekhono lama-ultrasonic, emhlabeni jikelele. Njengoba i-Hielscher yenza amaprosesa ase ultrasonic kuze kube 16kW amandla ngedivayisi eyodwa, nakhu akukho mkhawulo esitshalweni sesitshalo noma ukucubungula amandla. Amaqoqo ezinhlelo ezimbalwa ze-16kW asetshenziselwa ukwakhiwa kwemithamo emikhulu yamafutha ahlaselwa. Ukusebenza kwephethiloli yezohwebo ayidingi amandla amaningi e-ultrasonic. Imfuneko yangempela yamandla inganqunywa isebenzisa iproksi ye-1kW ultrasonic ebangeni lesikhulu. Yonke imiphumela evela ezinhlolweni ezinjalo ze-bench-top ingaba senziwe kalula.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi oluthe xaxa mayelana nokusetshenziswa kwe-ultrasound emulsification yamanzi abe yifutha.
Canfield, A., C. (1999): Imiphumela ye-Diesel-Emulsion Water ukushisa kwi-Diesel Engine NOx Ukukhishwa kwamanzi, ku: Isihloko Esiyinhloko Esifundiswa esikoleni esiphakeme esikoleni se-University of Florida, 1999.